Sirta maqalka guumeyska ee aadanuhu ka faaiidaysan karo! - BBC News Somali
Image caption Guumeys
Waxa kale oo cilmi-baarista lagu ogaaday in shimbiruhu ay iska daweyn karaan dhegaha marka ay gaboobaan , waxaana loo malaynayaa in habkan uu bini'aadamkana ka caawin karo in ay iyaguna ay maqalkooda daweyn karaan marka uu qofka gaboobo.
"Shimbiraha waxa ay maqalkooda u daweyn karaan sida ay bini'aadamka u daweeyaan dhaawacyada jirka kasoo gaara" ayuu yiri.
Bini'aadamka ayaa la sheegay in aysan u suurtogalaynin in ay dib ugu soo baxaan unugyada maqalka, balse shimbiruhu dib ayay ugu soo baxaan.
Dr. Stefan Heller oo ka tirsan jaamacadda Stanford oo ka hadlay daraasaddan oo lagu daabacay majaladda Royal Society Proceediings B, ayaa sheegay in ay tahay in la'is barbardhigo daraasadan shimbiraha iyo kuwa laga sameeyay naasleyd.
Mid ka mid ah guumeysta ayay da'deedu ahayd 23 jir , da'daasi oo ah mid aad u weyn marka la eego cimriga shimbiraha , waxaana la ogaaday in aysan ka maqal yarayn shimbirihii kale ee aad uga da'yaraa.
Cilmi-baarista xayawaanka lagu sameeyo ayaa waxaa inta badan looga gol leeyahay in aadanuhu ka faa'iideystaan, gaar ahaan arrimaha caafimaadka iyo sancooyinka kale ee casriga ah.
Masas weerar ah oo halis geliyay jasiiradda Guam
Noolaha halista ugu jira in ay dunida ka dabar go'aan
Sawirro Sawirro shimbiro laga qaaday oo abaal marin lagu mutaystay
3 Sebtembar 2017